29 MARTSA 1947 : NISOTRO NY NANGIDY NY VAHOAKA MALAGASY – MyDago.com aime Madagascar
29 MARTSA 1947 : NISOTRO NY NANGIDY NY VAHOAKA MALAGASY
Samy niresaka ny mahakasika ny datin’ny 29 Martsa 47 avokoa ireo mpandahanteny rehetra teny amin’ny Magro Behoririka androany. 67taona hoy Donazy no namoana ny malagasy tia tanindrazana. Raha olona izany efa zokinjokiny ihany, ary raha mpiasampanjakana dia efa nisotro ronono. Nigoka ny ronono marina ve ny malagasy ? Nisotro ny mangidy ny vahoaka malagasy, ary sempotry ny fahantrana. Izany ve no nitoloman’ireo ray amandrenintsika. Ny tanindrazana amiko dia ny voalohany ny tany dia i Madagasikara, ny faharoa dia ny vahoaka monina ao aminy, ka raha tena tia tanindrazana ianao dia tia azy. Iaharantsika mahala ny zavanisy fa ny 29 Martsa dia fanaterana voninkazo, tsy ho ratsy akory izany, fa izay ve no mendrika hoa n’ireny ray amandreny ireny. Tsy tamin’ny 1947 ihany no namonoan’ny frantsay ny malagasy fa nanomboka tamin’io no nipoaka ny sarobilany. Nahatratra 89000 ny olona maty tamin’io nefa malagasy mitaky ny marina. Mendrika ho hajaina ve izany mpamono olona izany. Ny filoha Ravalomanana ihany no sahy nijoro nanohitra ny frantsay.
Rehefa miresaka ny tolona hoy Ignace dia inona no vokatry ny tolona, inona daholo ny tolona nisy teto. 100 taona ny tolona VVS, inona no vokany, 67 taona ny tolona 47 inona no vokany, 5 taona ny tolona 2009 inona no vokany. Lazaina fa tolona namoizana aina ireny fa ny vokany dia matimaty foana ireny olona ireny satria nambara fa heady tamin’ny mpanjanan-tany ny Malagasy(VVS). Niady tamin’ny jadona tamin’ny 91 fa inona no vokany. Vokany dia maro no namoy ny ainy fa matimaty foana, aiza ilay fitiavan-tanindrazana. Tamin’ny 47 dia mbola nifampitadiavana ny hoe inona izao no atao. Nilaza Rajaonah Andrianjaka sy Rabesaika Guillaume fa namadika ny nanapoaka ny 47. Ho anay dia lazainay fa fanompana an’I Moramanga ny filazana izany. Tsy marina izany. Mangataka amin’ny fanjakana izahay tsy fantatra mazava ny atony nanapoahana ny 29 Martsa 1947. Leo ny frantsay ny manampahaizana dia nanohitra, leo ny mpanjanantany ny gasy, leo ny fitondrana sosialista ny gasy tamin’ny 91, leo ny jadona ny gasy tamin’ny 2002 ka iza no mpamadika. Antso ho an’ny mpitondra ankehitriny , satria nampizarazara ny Malagasy ianao andriamatoa filohampirenena nametraka ny voninkazo teny Ambohitsaina nefa misy Malagasy milaza fa namadika ianao. Noho izany na ianao hanajanona ny fankalazana ny 29 martsa. Avohay ny lalàna fa misy tolona natao tamin’io daty io izay leon’ny fanjanahantany ny gasy.
Raharaha 29 Martsa 1947 : ananan’ny Malagasy trosa ny Frantsay
Auteur Solo Razafy*Publié le 29 mars 2014 30 mars 2014 Catégories Politique
8 pensées sur “29 MARTSA 1947 : NISOTRO NY NANGIDY NY VAHOAKA MALAGASY”
Tsy hamokatra ny tolona raha mbola misy foana ny mpamadika sy ny tia-tena ê !
Alohan’ny fimenomenonana, dia tokony mba araha-maso tsara aloha ireo mpamadika ao amin’ny Magro, ireo be resaka ao amin’ny Magro kanefa zavatra tena tsy azo ekena no atao any ivelany !
Fotoanan’ny fieritreretana androany sy rahampitso alahady, indrindra ireo hoe « mpivavaka » !!
Tsy rehefa mitabataba etsy sy eroa, mangataka ny fampiarana ny tondrozotra dia hoe mitolona !
Tafaverina ve ny Filoha izay nodradraina indray andro izay hoe, « Fito andro » sisa ?
Nahoana no nankatoavina io Lalampanorenana fôpla io ? Hita izao ny vokany !
Tena mpitolona marina sa dia tena vendrana ?
Est-ce qu’on a le droit de tout pardonner ? Quid des crimes commis par les putschistes ?
J’aimerais partager avec vous, surtout en ce jour de commémoration, ce blog que j’apprécie beaucoup !
Ampio indray izy ry Omer…da hiverina ho Prezidan’ny ANP a ! PM tsy hanao n’inon’inona
Efa ho feno 129 taona no nanjakan’ny frantsay teto Madagasikara (2014-1895), nefa mola amny ny »sitrpony « iska are’izao!Na iza faly na iza tsy faly dia
ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANAANA MARC no sahia nifanandriny tamin’izany fanjanahany izany tamin’ny fifidianana nataon’ny 16 décembre 2001 ,izay nifidianan’ny Malagasy azy dia ny fihodinana voalohany na dia nakery aza ny halabato sy ny fitsirakiainy ny valin’ny fifidianana !
Izany fandresena izany fandresen’ny Malagasy ,izay sahia tsy nanaraka ny toromarikin’ny fitondran-dratsiraka mba tsy hampianaka ny vato fa ny mpitondra teo aloha ihany no mpitondra efa mahay ,satria ho fahatelo izao izy no hitanantana ny Firenena..
Nefa ihany resy izy ,saingy tsy nahay resy ka tsy nanaiky io safidin’ny Vahoaka..
Io tsy fanekena ny safidin’ny Vahoaka izany no anton’izao kirizy izao .
Tsy misy finaritra amin’izao fahataran’ny fodian’ny
Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC izao.Tsy hoe koa mety aminy izao sehon-javatra izao ,fa fantany sy hainy ny sarotra misy eto amin’ny Firenena ,koa araka ny fandinihana dia tsy mody Antanindrazana ny Filoha raha tsy azony ireo « zavatra » ilain’ny Malagasy , ny vola etina hanaovana ny asa fampandrosoana sy fanarenana ary fiadina amin’ny fahantrana (sakafo ,akanjo ,rano azo sotroina..) satria tsy mifanaraka amin’ny fisainany raha tsy mitondra mofo (asa , fanafody , kojakoja ho an’ny mianatra… ary indrindra HAFALIANA , FITSAHARAN’NY ,AHIAHY ARY FANANTENA FAHAFAHABNA SY FANDRIHAPAHALEMANA MBA HISIAN’NY FAMPANDROSOANA SY NY FANATSARANA AINGANA NY FIAINAM-BAHOAKA !
KOA IANGAVIO I NGILO MBA HO LALAOVINY MAFY NY DRIDRANY MIHIRA NY FODIAN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC
EFA HO 129 TAONA IZAO NO NIDRADRADRA NY MALAGASY NEFA MBOLA IZAO VOAZANAKA IZAO ISIKA..
Izany no fijeriko ny mampaharitra ny fiandrasana ny fodiany!ENY DRADRAINA NY FODIANY !
Misy sofina marary noho izany angaha? Tsy ahoan’ny Malagasyizany fitarainana izany ! Tsy problème-ndrozo izany na kely aza !
31 mars 2014 à 2 h 07 min
Diniho tsara ny sehon-javatra tatoato ,fa aza hamaivananina izy ireny :
–maty eo amin’ny sahy politique rajoelina,satria nai rajao…fanina aza tsy manaiky intsony baibaikony.
–ny fidabok’i ranakisoa ao amin’ny Antenimiram-pirenena dia porofo » fa ny ratsy atao..dia loza miantona !
–‘ty rajao…fanina ity dia toa mimotra foana ny fanendreny ny praiministra ? Fa nahaona ?
Valin’izany fanontaniana izany :
Tonga teto ANTANANARIVO ny délégation-ny gouvernement américain ,mikarakara ny fifandraisana amin’ny AFRIQUE..
Nihaona tamin’ty rajao..fanina izy ireo ary niteny imasoimaso fa : »ny fifandraisana USA-MADAGASCAR dia tsara. fa kosa Izahay amérihanina dia hanome fanampiana ara-bola ho an’ny fampandrosana ,raha tsy misy eo amin’ny fitondrana eto MADAGASCAR raha tsy misy ny fanajana ny ZON’OLOMMELONA SY DEMOCRATIE ARY NY ETAT DE DROIT ! »
Atramin’izao rajao..fanina bia mihevitra fa tsy hitana ny tenin’ny Américains !
Ary aoka ho fantany fa ny Amricains , ny Japonais ,ny Allemands ,ny Angilisy etc…no mandoha vola be indrindra an’ny FMIsy ny BM !
Mandeha etsy eroa i rajao…mba hafahana milaza fa tsy manam-potoana izy hijeriny ny…fanendrena ny PM !
Sao mba tsy mahafeno ireo fepetra apetraky ny Américains ireo candidats ho PM ?
Sa miandry toro lalàna , avy amin’iza ?
Sa io fanendrena izay ho PM dia tsy maintsy manaraka izay voalazao amin’ny feille de route ?
« Rivodrivotra an-kadilana !
Aiza re izany lalana o,
Miakatra ve sa midina o ? »
1 avril 2014 à 15 h 19 min
rivorivotra Behoritika sy rivorivotra avy eny Anosy no rivotra hihainana any Tananarivo ry DCR ô ,
Azo ampiana essence Dior garanty « zoridiry » , solon’ylang ylang sy vetiver !!!!!!!!
fofom-poza labellisé …………
Tsy azoko ny tianao lazaina !
Ny hirahira « Rivotra Ankadilalana » dia hira mitantatara olona mamo ,tsy mahafantatra intsony ny lalana tokony arahany §
I rajao…fanina ..tena fanina dia very lalana ,tsy fantany zay tokony hataony !
tsy fantatro fa hira momba olona mamo io hira io….
ny rivorivotra an kadilalana noheveriko : rivotra manitra ! koa azafady
Précédent Article précédent : RAKRISY SY NY FORONGONY : NIDABOKA FA TSY NANARA-DALANA
Suivant Article suivant : Fankalazana ny 29 martsa : MENATR’OLONA RAKRISY